အောင်လအောန်ဆိုင်းကို ကမ္ဘာမှာမြန် မာပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့် ဟီးရိုးလို့ တင်စားလိုက်တဲ့ ယုန်လေး – XB Media Myanmar
အောင်လအောန်ဆိုင်းကို ကမ္ဘာမှာမြန် မာပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့် ဟီးရိုးလို့ တင်စားလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
အောင်လကို(၁၀)စက္ကန့်အတွင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲချပြီး ပွဲသိမ်းလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိစေချင် တယ် လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ရိုင်နီယာကတော့ သူ့စကားအတိုင်း တကယ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ တယ်ဆိုရ မှာပါ ။ (၂)ချီအတွင်းအလဲထိုးမယ်လို့ပြောထားပေမယ့်စောစောစီးစီးအောင်လကိုပွဲသိမ်းနိုင်ခဲ့ ပြီး အောင်လကို အားပေးကြတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ဝမ်းနည်းစရာညတစ်ညပါပဲ ။
ရှုံးနိမ့်သွားပေမယ့်လည်း မြန်မာပရိသတ်တွေကတော့ အောင်လအာန်ဆိုင်းကို အားပေးခဲ့ကြပြီး နောက်တစ်ပွဲကိုနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ခွန်အားတွေပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ အနုပညာရှင်တော် တော် များများကလည်း ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ အောင်လအာန်ဆိုင်းအတွက် အားပေးစကားတွေ ကို သူတို့လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။ အဆိုတော်ယုန်လေးကလည်း ဘာပဲ ဖြစ် ဖြစ် အားပေးတယ် .ဒီပွဲ မနိုင်ရင် . နောက်ပွဲ ပြန်ကျူံး အောင်လ မြန်မာ အလံကိုခြုံပြီး ကမ္ဘာမှာ မြန် မာပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Hero အမြဲတန်း အားပေးဖို့အသင့် ဆိုတဲ့စာသား လေး နဲ့အတူ အားပေးဝန်းရံခဲ့ပါတယ် ။
မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အောင်လအပေါ် ချစ်ခင်အားပေးမှုကတော့ ကြောက်ခမမ်းလိလိပါပဲ .။ မြန် မာနိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ အ ပေါ် စိတ်မပျက်ဘဲ ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့အတွက် အားပေးစကားတွေ ပြောခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာပရိ သတ်တွေကတော့ တကယ်ကိုချစ်စရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
ေအာင္လကို(၁၀)စကၠန႔္အတြင္း ၾကမ္းျပင္ေပၚလဲခ်ၿပီး ပြဲသိမ္းလိုက္လို႔ရတယ္ ဆိုတာ သိေစခ်င္ တယ္ လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ႐ိုင္နီယာကေတာ့ သူ႔စကားအတိုင္း တက ယ္ ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ တယ္ဆိုရ မွာပါ ။ (၂)ခ်ီအတြင္းအလဲထိုးမယ္လို႔ေျပာထားေ ပမယ့္ေစာေစာစီးစီးေအာင္လကိုပြဲသိမ္းႏိုင္ခဲ့ ၿပီး ေအာင္လကို အားေပးၾကတဲ့ ျမ န္မာ ပရိသတ္ေတြအတြက္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာညတစ္ညပါပဲ ။
ရႈံးနိမ့္သြားေပမယ့္လည္း ျမန္မာပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေအာင္လအာန္ဆိုင္းကို အားေ ပး ခဲ့ ၾကၿပီး ေနာက္တစ္ပြဲကိုႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ခြန္အားေတြေပးခဲ့ၾကပါတယ္ ။ အႏုပညာရွင္ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားကလည္း ရႈံးနိမ့္သြားတဲ့ ေအာင္လအာန္ဆို င္း အတြက္ အားေပးစကားေတြ ကို သူတို႔လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာထက္ကေန ေရးသားခဲ့ ၾကပါတယ္ ။ အဆိုေတာ္ယုန္ေလးကလည္း ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ အားေပးတယ္ .ဒီ ပြဲ မႏိုင္ရင္ . ေနာက္ပြဲ ျပန္က်ဴံး ေအာင္လ ျမန္မာ အလံကိုၿခဳံၿပီး ကမာၻမွာ ျမန္ မာပုံ ရိပ္ကိုျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Hero အၿမဲတန္း အားေပးဖို႔အသင့္ ဆို တဲ့ စာသား ေလး နဲ႔အတူ အားေပးဝန္းရံခဲ့ပါတယ္ ။
ျမန္မာပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေအာင္လအေပၚ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကေတာ့ ေၾကာက္ခမမ္းလိလိ ပါပဲ .။ ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္လ ည္း ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရတဲ့ အ ေပၚ စိတ္မပ်က္ဘဲ ဆက္လက္ႀကိဳးစားဖို႔အတြက္ အားေပးစ ကားေ တြ ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာပရိ သတ္ေတြကေတာ့ တကယ္ကိုခ်စ္စရာပါပဲ ပရိသတ္ ႀကီးေရ ..။
ဒွေးရဲ့ (၁၀)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရပွဲမှာ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားလေးကို ကိုဗစ် အတွက် ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မုဏ်း